Olee otú Idozi Computer kefriza
> Resource> Free> otú ndozi Computer freezes Up
Kasị kọmputa ọrụ enwetawo ha PC mberede kefriza, kpochidoro onwe ya na ịjụ ime ihe ọ bụla iwu. Nke a nwere ike na-ewute ewute na n'oge ndị kasị mma. Ọ na-emekarị pụtara na ihe ọ bụla data na ị na-arụ ọrụ na a ga-efu, dị ka ezi mgbe ị na-amanye ịrụ a usoro reboot.
E nwere ọtụtụ akpata kọmputa kefriza on malite, dị ka inwe na-ezighị ezi nsụgharị nke ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala arụnyere, software metụtara nsogbu na PC gị na ma ọ bụ miri nsogbu n'ime ndekọ na usoro faịlụ. Ha nwekwara ike ịbụ n'ihi nke ngwaike ọdịda.
Ọ bụrụ na kọmputa gị freezes mgbe ị na-amalite ya, ị nwere ike ọtụtụ omume na-agba ọsọ ozugbo. Lelee gị mmalite na nchekwa ma kpochapụ ọ bụla enweghị isi omume si wetere n'oge a. I kwesịkwara ego System nhazi ịba uru ikpochapụ anya ọ bụla omume ị na-achọghị na-amalite na-akpaghị aka na Malitegharịa ekwentị gị PC.
Mgbe na kọmputa na ihuenyo freezes, i nwere ike ịgbalị na-akwụsị na-agba ọsọ omume site na Task Manager, ma na-emekarị ị ga-reboot na-atụfu gị ugbu a data. Dabere na otú mgbe ị na-azọpụta ọrụ gị, nke a nwere ike nwere nnọọ mmetụta na gị arụpụtaghị na-eduga oké mkpa data a na-efu.
The nke nke kọmputa kefriza nwekwara ike mere site ọtụtụ ngwaike ngwaọrụ na usoro n'otu oge. Ị ga-achọ ego gị na ngwaọrụ Ọkwọ ụgbọala ahụ ma ọ bụrụ na e nwere ozi ọ bụla banyere ezighị ezi ngwaọrụ.
N'agbanyeghị ihe kpatara, amamiihe Wondershare PowerSuite Golden ga ngwa ngwa idozi nsogbu na weghachite PC aka zuru na oru oma na-arụ ọrụ iji. Nke a dị ike na ngwá ọrụ e juru n'ọnụ na utilities maka n'ịrụ niile cleanup aga-eme ị ga-mkpa ka ị na-PC na-arụ ọrụ optimally. N'ihi ya, ọtụtụ ihe nwere ike ịga na-ezighị ezi na a PC na ọ dịghị onye nwere ike na-esochi nke ọ bụla obere na isi njehie na mmejọ koodu. Tinye gwara ha, na-emecha backups na-arụ ihe niile ndị ọzọ dị oké mkpa ihe aga-eme na nke a, na PC mmezi pụrụ ịghọ a oge ọrụ! Ọ bụrụ na kọmputa enweghị usoro freezes ma ọ bụ kọmputa freezes mgbe na-abaghị uru, ka Wondershare PowerSuite Golden ngwa ngwa kwụpụ na idozi nke.
Wondershare PowerSuite Golden karịrị echiche na-edebe ndekọ dị ọcha, ịrụzi diski ike mbanye sectors na nkebi tebụl, nsuso ala na-ebibi malware, cloning na draịvụ ike na juputara ịlele ahụ PC. Ọ bụ ịba uru nke oke nke na-edebe gị PC ọma nọgidere na-enwe na a pụrụ ịdabere.
Olee otú ịrụzi diski ike Drive (HDD) ọjọọ oru